DOBERMAN PINSCHER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Doberman Pinscher Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Alexander (madow iyo miridhku) iyo Ember (casaan iyo miridh) - oo ku faraxsan Doberman Pinschers oo iska soo dhigaya kamaradda
doh-ber-muh n PIN-sher
Doberman Pinscher waa eey cabbirkiisu dhexdhexaad yahay, oo laba jibbaaran oo la dhisay oo leh isafgarad, jirka muruqyada. Madaxa waa dheer yahay oo marka dhinac laga fiiriyo, wuxuu umuuqdaa cirif aan cadi lahayn. Dusha sare ee qalfoofku waa fidsan yahay, wuxuuna isu beddelayaa masaska oo leh istaag yar. Midabka sanku wuxuu kuxiranyahay midabka jaakada eyga oo madow madow eeyaha madow, buniga madow eeyaha gaduudka ah, mugdiga mugdiga ah eeyaha buluuga ah, midabka madow ee eyda cowska leh iyo casaanka eyda cad. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Midabka indhaha yicibta u eg waa midabyo kala duwan oo bunni ah, waxayna kuxirantahay midabka jaakada eeyga. Gudaha Mareykanka dhagaha waxaa badanaa loo jaro inay istaagaan (waa la gooyaa da'da qiyaastii 12 toddobaad). Dhagaha dhagaha waa in la duubaa dhowr bilood si looga dhigo inay istaagaan. Qaar badan oo ka mid ah kuwa wax soo saara ayaa bilaabay inay ka tagaan dhagaha cunugga si dabiici ah. Haddii dabiici ahaan looga tago waxay yeeshaan dhagaha xoogaa sida qoob-ka-ciyaarka. Dabada badiyaa waxay ku xirtaa da'da 3 maalmood. Haddii dabada aan la xidhin waxay soo baxdaa dabad xoogaa u eg sida qoob-ka-ciyaarka. Fiiro gaar ah: Dhagaha oo la jarjaro iyo dabo lagu xidho ayaa sharci daro ka ah dalal badan waxaanan bilaabaynaa inaan aragno eeyo aad u tiro badan oo qaybo jidhkoodu xeelad ku reebtay. Laabta ayaa ballaadhan lugahana si toos ah ayey u toosan yihiin. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Dharka gaaban, adag, qaro weyn ayaa ku yaal sagxad. Mararka qaarkood qoorta waxaa ka jira shukumaan midabkiisu yahay cawl oo aan muuqan. Koodhku wuxuu ku yimaadaa madow, madow oo leh calaamado midab leh, buluug-cawl, casaan, cows iyo caddaan. Markay calaamaduhu soo baxaan waxay ka sarreeyaan isha kasta, xuubka, cunaha, foodda hore, lugaha, cagaha iyo dabada. Waxa kale oo jira midab cad oo adag. In kasta oo calaamadaha cad loo arko inay khalad ku yihiin naadiyada qaarkood, kuwa kalena waa la aqbalaa.
Doberman Pinschers waa kuwo aad u xiiso badan, firfircoon oo xoog badan oo leh awood iyo adkeyn. Dobes waxay jecel yihiin inay la joogaan dadkooda mana ku habboon yihiin qolka ama nolosha daaradda waxay u baahan yihiin isdhexgal aadanaha iyo hoggaamin. Daacadnimo, dulqaad, u heellan iyo kalgacal qoys. Go'aan, geesinimo iyo adkaysi inta ay shaqeynayaan, waa kuwo aad loola qabsan karo, xirfad sare leh oo dhinacyo badan leh. Iyagu waa indheer garad iyo aad u tababar fudud . Waxay yihiin ilaalin aad u fiican iyo ilaaliyaha eyga oo uma baahnid tababar dheeraad ah oo ilaalin ah. Noocani maaha mid loogu talagalay qof walba. Doberman wuxuu ubaahan yahay milkiile doonaya oo awooda inuu muujiyo a awood dabiici ah eyga . Dhammaan xubnaha qoysku waa inay noqdaan kuwo adag, kalsooni leh oo iswaafaqsan, dejinta xeerar oo ku dheg iyaga. Baro inaad si sax ah u maamusho eeyga, maadaama ay Dobermans noqon karto madax adeyg iyo rabitaan haddii loo oggolaado inay yeeshaan waddo u gaar ah. Wax walba waa inay ahaadaan shuruudaha aadanaha. Eygu waa raacaha, iyo aadanuhu waa hogaamiyaasha . Eygu wuu qadarin doonaa ogaanshaha isaga ku rid baakaddiisa oo aad ku kalsoonaato arrintaas. Waa inuu si fiican u ahaadaa bulsho markuu da 'yaraa si looga hortago khiyaamada. Kicinta maskaxda iyo jimicsi badan oo maalinle ah waa muhiim si loo soo saaro Dobe farxad leh, maskax deggan. Doberman wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid joogto ah oo dhameystiran tababaray . Dobes waxay noqon kartaa eeyo qoys oo wanaagsan haddii doorka alfa uu leeyahay bini-aadamka iyo haddii ay helaan jimicsi ku filan, si wanaagsan loo tababaray oo ay la dhaqmaan carruurta. In kasta oo Doberman uu leeyahay sumcad inuu aad u yahay eey dagaal badan , tani kaliya maahan kiiska. Tusaale ahaan, Dobes waxay sameeyaan eeyo daaweyn weyn. Arimaha ayaa soo ifbaxa markay la degan yihiin milkiileyaasha aan soo bandhigin hoggaan sax ah iyo / ama aan bixin jimicsi ku filan . Way macaan yihiin oo way u jilicsan yihiin bukaanka guryaha kalkaalinta ah - suulasha lugta ee tubbada IV-ka waxayna ku socdaan xawaaraha dadka deegaanka (oo aad u gaabis noqon kara), isla mar ahaantaana si adag u difaaci doonta sayidyadooda haddii ay lagama maarmaan noqoto. Heerarka xukunku way kala duwan yihiin, xitaa isla qashin isku mid ah iyo dabeecadda dabeecadda ayaa si weyn u kala duwanaan doonta iyadoo ku xiran hadba sida milkiilayaashu u fahmaan dhaqanka canine iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay waqti siiyaan waxa ey u baahan yihiin si dabiici ah.
Dhererka: Ragga 26 - 28 inji (66 - 71cm) Dumarka 24 - 26 inji (61- 66 cm)
Miisaanka: 66 - 88 rodol (30 - 40 kg)
bull terrier lab iskudhaf eeya yaryar
'Warlock' Doberman waa eray loo bixiyo Doberman-ka oo ka weyn cabirka caadiga ah ee naadiyadii keydku ay dul saareen.
Ku-soo-baxa laf-dhabarka ilmo-galeenka ee suurtogalka ah (wobbler syndrome) sababtoo ah isku-darka qoorta laf-dhabarka iyo isku-xoqidda laf-dhabarka suurtagalnimada cilladda dhiigga ee laga dhaxlo (cudurka Von Willebrands) buurnida da'da dhexe. Sidoo kale u nugul arrimaha maqaarka, buunbuunin , hip dysplasia iyo cilladaha wadnaha lagu dhasho. Hidda-wadaha soo saara albino (caddaan) Doberman ayaa la sheegay inuu yahay isla hidda-wadaha soo saaray shabeellada caanka ah ee caanka ah iyo libaaxyada ay leeyihiin Siegfried & Roy ee magaalada Las Vegas. Qaarkood waxay kaloo rumaysan yihiin in hiddo-wadaha uu yahay hiddo-wade, taas oo macnaheedu yahay inuu 'la wareegayo' isla markaana uu daboolayo midabka eygu haddii kale noqon lahaa. Fanaaniinta White Dobe waxay yiraahdaan ma jiraan wax caddeyn ah oo muujinaya in hiddo-wadahan uu xambaarsan yahay wax walwal ah oo walaac caafimaad leh oo mararka qaarkood lala xiriiriyo xayawaannada kale ee caddaanka ah sida dhago la'aanta, indho la'aanta ama maskaxda aan xasilloonayn. Bixiyeyaasha qaarkood waxay baryaan inay kala duwanaadaan, iyagoo ku andacoonaya hiddo-wadaha inuu sababo arrimo caafimaad.
Guriga dhexdiisa kuma fiicnaan doono haddii jimicsi ku filan sameeyo, laakiin wuxuu ku fiican yahay ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Dobes waa kuwo aad u qabow oo xasaasi ah oo aan ahayn eeyaha dibadda. Taasi waa sababta booliska meelaha qabowgu uusan u isticmaali karin.
Doberman waa mid firfircoon, oo leh awood weyn. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a maalin kasta, socod dheer ama orod, oo loo baahan yahay in lagu cidhibtiro dhinac ama gadaashiisa bini'aadamka hogaaminaya, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hoggaamiyaha ayaa ku hoggaamiya jidka hoggaamiyahaasna wuxuu u baahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Ilaa 13 sano.
Dobes waxay ubaahantahay qurxin yar waana dhexdhexaad daadiyayaal.
Kani waa nooc asalkiisu dhow yahay. Waxaa lagu horumariyey Jarmalka 1860meeyadii, iyadoo loo maleynayo inay ka gudubtay adhijirradii gaboobay, Jarmal Jarmal , Roobleyda , Beauceron , Manchester Terriers iyo Greyhounds . Abuuraha isku-darkaani wuxuu ahaa canshuur-qaade Jarmal ah oo lagu magacaabo Louis Dobermann. Dobermann wuxuu ku qasbanaa inuu si joogto ah ugu safro aagagga ay burcaddu ku badan yihiin, wuxuuna go'aansaday inuu sameeyo waardiye iyo ilaaliye awood u leh wax ka qabashada xaalad kasta oo timaadda. Taranka waxaa loogu magac daray asalkiisa (soo gaabiyey hal n). Doberman waxaa markii ugu horaysay lagu soo bandhigay show eyga sanadkii 1876. Isla markiiba waxay ahayd guul weyn. Doberman waxaa markiisii ​​ugu horaysay aqoonsaday AKC-da sanadkii 1908. Doberman Pinschers waxay leeyihiin hibooyin badan oo ay kamid yihiin raad raaca, ilaalada, ilaalada, shaqada booliska, shaqada militariga, raadinta iyo samatabbixinta, shaqada daaweynta, adeecida tartanka iyo Schutzhund.
madow iyo bunni mini dachshund
'Kani waa eeygayga Dobe ee loo yaqaan Sara. Midabkeedu waa buluug. Aad bay u macaan tahay.
Rommel the Doberman Pinscher oo reer Australia ah oo jira 18 bilood— 'Rommel waxaa laga heli karaa isagoo sharaabaadyo sharaabaya, isagoo wareegaya ardaaga kana fiiqaya deyrka. Waxba kama jecla inuu waqti la qaato dadka oo wuxuu ku ogeysiinayaa goorta uu doonayo inuu ciyaaro isagoo ku ruxruxaya alaabada carruurtu ku ciyaarto lugtaada ama ku rido dhabtaada. '
Rocky the Doberman Pinscher puppy at 3 bilood jir
Primo the Doberman Pinscher oo ah 18 bilood jir shaqadiisa ilaalinteeda caadiga ah. Wuxuu jecel yahay socodkiisa maalinlaha ah iyo ku ciyaarista waxyaabaha uu ku ciyaaro.
'Deevo the Doberman Pinscher oo jira 9 bilood waa xishoodaa ilaa uu ku barto, markaa wuu kugu boodayaa adiga oo dhan. Wuxuu jecel yahay inuu lugeeyo, socod ku maro xeebta, iyo inuu la ciyaaro eeyaha dadka kale (aad u saaxiibtinimo). Wuxuu neceb yahay markay joojiyaan la ciyaarida isaga si uu u nasto ama u nasto. Waqti kasta oo ka mid ah ayuu qodo god, marar dhif ah ayuu dhacaa. Dhawaq yar, marna iskuma dayo inuu ka daba ordo eeyaha kale, marwalba wuu i dhejiyaa meel kasta oo aan guriga ku wareego, weligay indhahayga kama baxo. Doberman ma ahan mid dagaal badan sida dad badani yiraahdaan, eey kuma dhasho gardarro ayaga ayaa la abuuray. '
'Max the Doberman Pinscher oo reer Norway ah oo jira 5 sano jir iyo 72 cm. (28 inji) iyo 42 kilo (92 rodol). ' Max waa tusaale ka mid ah Doberman leh dabada iyo dhagaha dabiiciga ah. Lama goynin ama lama xirin.
Doberman madow iyo midab buluug ah oo ag taagan Doberman cad-Sawirka waxaa iska leh Jody Franklin
'Tani waa Sanjabiil ku dhowaad 3 sano jir. Iyadu waa fawn / miridhku Doberman waana eey weyn, aad u jecel oo jilicsan. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto inaadeerkey 3-sano jir ah iyo gabar 1-jir ah oo aan abti u nahay. '
ingiriiska springer spaniel midabada beerka & cadaanka
Vera cad ee Doberman Pinscher— 'Kani waa jaceylkeyga Vera. Waxay bilaabeysaa inay qaan gaarto, waxayna u dhaqmeysaa wax yar sida eey. Sawirka sawirka Vera waa 11 bilood. Dabeecaddeedu waa weyn tahay, qof walba way ku ciyaareysaa, laakiin haddii iyadu tahay waxay dareemeysaa khatar ay ku bixinayso buuq gadaal ah . '
'Titan waa nin da'diisu tahay 3 iyo 1/2 jir Doberman madow iyo jir ah oo culeyskiisu yahay 101 rodol. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro wax soo iibsiga at baarkinka subax kasta roob ama dhalaal. Wuxuu qabsan karaa kubbadaha mararka qaarkood ka hor inta aysan dhulka ku dhicin. Wuxuu ku hanan karaa 3 kubbadood oo tennis ah afkiisa hal mar. Wuxuu had iyo jeer leeyahay ama kubbad ama toy ku jira afkiisa ama waa calalinta on wax. The caruurta ka ciyaarista baarkinka jacayl inuu u yimaado si ay u salaaxaan isaguna aad buu u yahay dabacsan oo dulqaad leh iyaga la . Aad buu u ugaadhsadaa oo wuxuu jecel yahay ugaarsiga iyo cayrsashada jiir , dabagalo, bisadaha iyo baabuurta hagta. Ma jecli waxyaabaha hawada ku duulaya sida qaniinyada, buufinnada hawo kulul, diyaaradaha fog fog iyo kuwa waaweyn shimbiraha sida tukaha iyo hawraar . Waxaan u maleynayaa inuu qeyb ahaan muuqaalkiisa wanaagsan ka helayo awoowgiis oo ahaa show eyga . Nasiib darro habaryartiis waxay u dhimatay DCM hooyadiisna waa u dhimatay oo waa la soo nooleeyay. Waxaan rajeynayaa inuusan heysan oo aan sanado badan oo waa weyn la qaato wiilkeyga. '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Doberman Pinscher
Sawirada Doberman Pinscher 1
Sawirada Doberman Pinscher 2
Sawirada Doberman Pinscher 3
Sawirada Doberman Pinscher 4
Sawirada Doberman Pinscher 5
Doberman Pinscher Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
dachshund iyo yorkie oo isku dhafan eeyo
chihuahua iyo iskudhafka bulldog faransiiska
salka eeyga dabadiisa oo bararay
tilmaamaha jarista gaaban ee jarmalka isku-darka iskudhafka dahabiga ah
eeyaha adhijirrada ah ee caucasian ee iibka ah
madow iyo cadaan canaan ah
buluug cidhiidhi ah oo lagu qasay pitbull